Xog: Maxaa ka jira Sheegashadda Alshabaab ee ah in Xalay la duqeeyay Gaari Shacab,? – Hornafrik Media Network
Xog: Maxaa ka jira Sheegashadda Alshabaab ee ah in Xalay la duqeeyay Gaari Shacab,?
Warbaahinta ku hadashay Afka Kooxda Alshabaab ayaa soo bandhigay Sawiro ay ku sheegeen Gaari Hoomeey ah oo la duqeeyay Xalay, kaasoo ay sheegeen inuu yaalay meel cidlo ah, isla markaana ay ka maqnaayeen Darawalka iyo Kirishbooyga.
Alshabaab waxay sheegeen inaysan wax khasaare Nafeed ah ka dhalan Duqayntaasi, Waxayna khasaaraha ku soo koobeen in la burburiyay Gaari Shacab leeyahay.
Maxaa laga dheehan karaa Sawiradda.?
Sawiradda ay soo bandhigeen Alshabaab waxay HornAfrik u bandhigeen Khuburo ku taqasustay inay sharaxaan Sawiradda iyo waxa ku xeeran waxaana daraasaad kooban oo lagu sameeyay Sawiradda soo baxday
In Sawiradda laga dhex arki arko Duqaynta kadib in Gaariga la saaray Qudaar u badan Moos, taasoo ay cadayn u tahay.
In Qudaarta Mooska ee ka dhex muuqata Gaariga ay bad qabto, isla markaana ay muuqato inaysan saarnayn Gaariga xilligii la duqaynayay.
In Gaariga oo Burbur xooggan uu soo gaaray, aysan suuragal ahayn inay bad qabto Qudaar ku dhex jirtay Gaariga oo ah wax jilicsan oo gacan lagu burburin karo, iska daa Gantaalee.
In Gaariga aysan suuragal ahayn in Darawalka iyo Kirishbooyga ay uga tagaan Jid cid la ah, iyadoo aysan jirin cid waardiyaynaysa. Taasoo ah wax aan looga baran Gaadiidka Dadwaynaha.
In Gaariga ay ka dhex muuqdaan Astaamo Hub inuu saarnaa.
In Gudaha Gaariga uu ka dhex muuqda Dhiig muujinaya in Dad wax ku noqdeen. Taasoo sida cad ay muuqato in la qarinayo Cidda ku waxyeeloowday Gaarigaasi.
Warbixinta Alshabaab waxaa ka jirta in goobta ay wax ka dhaceen ay tageen Boqolaal Dadwayne ah oo ka caraysan siday wax u dhaceen, lama arkin Sawiradda Dadwaynahaasi, taasoo xoojinaysa in Sawiradda aysan ka muuqan Cadaymo la aamini karo.
Gaariga La Duqeeyay Oo Moos Saaran Yahay
Alshabaab inta badan ma qirtaan Khasaaraha Nafeed iyo Midda Milatari ee ka soo gaara Weeraradda iyo Duqaymaha lala beegsado. Waana sababta mar kasta loogu jahwareero Duqaymaha dhaca.
Kadib Weerarkii Bariire ee lagu laayay Beeralayda waxay Alshabaab u arkeen fursad ay u isticmaali karaan Dacaayad in Weerar kasta oo lagu soo qaado ay ka dhigaan in la laayay Dad Shacab ah, iyadoona ay sii saacidayso Dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka oo aan si bayaansan u cadayn wixii dhacay, sheegayna warar iska soo horjeeda, taasoo ka dhigtay weerar kasta oo la qaado in Xogta ay bixiyaan Alshabaab loo arko midda ugu saxsan.
Inkastoo ay HornAfrik isku dayday inay hesho Xogta Rasmiga ah ee Weerarkii Xalay haddana wali waa xilli hore in rasmi ah loo helo Xog dhamaystiran, Waxaanse la xiriirnay Saraakiil Sirdoon oo codsaday in Magacooda loo adeegsado Warbaahinta, kuwaas oo isugu jira Soomaali iyo Maraykan, Waxayna isku raacsan yihiin in Duqayntii Xalay oo ka dhacday Deegaanka Mubaarak ee Shabeelaha Hoose lala helay Bartilmaameedkii la rabay.
Inta la hubo Horjooge bartilmaameed ah ayaa lagu dilay Weerarkaasi, waxaana aan wali shaacin Horjoogahaasi midka uu yahay.
Gaari Caasi Ah Oo Maraykanku Duqeeyay
Gaariga Caasiga Ah Oo Dusha Looga Dhuftay Gantaal
Gudaha Gaari Ay Duqeeyaan Maraykanku
Air Strikes In The Lower Shabelle Region